म मरे पछि स्वर्ग जाने कुराको निश्चय म कसरी हुन सक्छु?
के तपाइलाई निश्चित थाहा छ कि तपाईंसँग अन्नत जीवन छ र तपाईंको मृत्युपछि तपाईं स्वर्ग जानुहुन्छ ? परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईं निश्चित हुनुहोस्! धर्मशास्त्रले भन्दछ: “तिमीहरूले अनन्त जीवन पएका छौँ भन्ने कुरा जान भन्ने हेतुले परमेश्वरका पुत्रको नाउँमा विश्वास गर्ने तिमीहरूलाई यो पत्र लेख्दैछु ” (१ यूहन्ना ५:१३)। मान्नुहोस् कि तपाईं अहिले परमेश्वरको अघि खडा हुनुहुन्छ र उहाँले सोध्नुभयो, “ म तिमीलाई किन स्वर्ग जान दिऊँ?” तपाइलाई थाहा नहुन सक्छ? तपाईंले यो जान्नु आवश्यक छ कि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र हाम्रो निम्ति एउटा बाटो दिनुभएको छ जसको कारण हामी निश्चय हुन सक्छौँ कि हामी सदाको निम्ति कहाँ रहनेछौँ। धर्मशास्त्रले यसलाई यसरी पनि भन्दछ: “किनभने पऱमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँ माथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्” (यूहन्ना ३:१६)।
शुरूमा हामीले हामीलाई स्वर्गबाट टाढा राख्ने समस्याको बारेमा बुझ्नुपर्छ। समस्या यो हो - हाम्रो पापमय स्वभाव ले गर्दा हामी परमेश्वरसँगको सम्बन्धबाट टाढा छौँ। हामी सबै जना हाम्रो स्वभाव र विकल्पले नै पापी छौँ। “सबैले पाप गरेका छन्, र परमेश्वरको महिमा सम्म पुग्नबाट चुकेका छन्” (रोमी ३:२३)। हामी आफुलाई बचाउन सक्दैनौ। “किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौँ - र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, नत्रता मानिसले घमण्ड गर्नेछ” (एफिसी २:८-९)। हामी मृत्यु र नरकको योग्य छौँ। “किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो” (रोमी ६:२३)।
परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र पापलाई सजाय दिनुपर्छ, अझै पनि उहाँ हामी लाई प्रेम गर्नुहुन्छ र हाम्रो पापको दाम पनि दिईसक्नु भएको छ। येशूले भन्नुभयो, “बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। मद्वारा बाहेक कोही पनि पिताकहाँ आउन सकदैन” (यूहन्ना १४:६)। येशू हाम्रो निम्ति क्रूसमा मर्नुभयो: “किनभने हामीलाई परमेश्वरकहाँ ल्याउन ख्रीष्ट पनि पापहरूका निम्ति सदाको लागि एक चोटि मर्नभयो” (१ पत्रुस ३:१८)। येशू मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो: “उहाँ हाम्रो अपराधहरूका निम्ति मारिनुभयो, र हामीलाई धर्मी तुल्याउनलाई जीवित पारिनुभयो” (रोमी ४:२५)।
अब फेरी मूल प्रश्न – “म मरे पछि स्वर्ग जाने कुराको निश्चय म कसरी हुन सक्छु?” उत्तर यो हो – प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईंले उद्धार पाउनुहुनेछ (प्रेरित १६:३१)। “तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनिहोरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो” (यूहन्ना १:१२)। तपाईंले अनन्त जीवन एउटा सित्तैँको उपहार स्वरूप प्राप्त गर्नुहुनेछ । “ परमेश्वरको सित्तैँको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो” (रोमी ६:२३)। तपाईंले अहिलेबाट नै पूर्ण र अर्थपूर्ण जीवन बिताउँन सक्नुहुन्छ। येशूले भन्नुभयो: ”म त तिनीहरूले जीवन पाऊन, र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाऊन भन्ने हेतुले आएँ” (यूहन्ना १०:१०)। तपाईं अन्नतकाल येशूसँग स्वर्गमा बिताउँन सक्नुहुन्छ, उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ: “अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु, र तिमीहरूलाई मकहाँ लैजानेछु, र जहाँ म छु, त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौँ” (यूहन्ना १४:३)।